कक्षा कोठा भित्र नै शि’क्ष’क र छात्रा यस्तो ह’र्कत गर्दै गरेको अ’वस्थामा भे’टीए **! भिडि’यो भाइरल हेर्नुहोस्।
मंग्सिर २६, २०७८ आइतबार 32
हाम्रो समाजमा गुरुको स्थान निकै उच्च हुन्छ । कैयौं गुरुहरु यस्ता थिए कि उनीहरुको अहिलेसम्म उदाहरण दिइन्छ । तर, अर्कोतर्फ अहिले केही शिक्षकले आफ्नो मर्यादा नै भुल्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समयमा एकजना शिक्षक र स्कुले छात्राको केही फोटो सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । कुनै कक्षामा लिएको प्रस्ट रुपमा देखिने यी फोटोहरुमा शिक्षकको अंगालोमा बेरिएकी एक युवती स्कुले ड्रेसमा नै छिन् ।
भानिन्छ प्रेम अन्दो हुन्छ यसले कुनै कुरालाई मतलब गर्दैन तर एक अधबैसे पुरुष र आफ्नै सानी छात्रा जस्तै देखिने यी बालीकाको यो कस्तो प्रेम हो त्यो भने बुझ्न सकिने खालको छैन । पछिल्लो समयमा विभिन्न फेसबुकमा यो तस्विर भाईरल बने पनि यो कहाको र कसको भन्ने तथ्य चाँही सार्वजानीक छैन ।
त्यस्तै अर्को अनौठो घटना भारतको आगराका एक शिक्षकको भिडियो केहि महिना अघि सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । ती शिक्षकले आफ्नो मर्यादा नाघ्दै शिक्षक शब्दलाई नै कलंकित बनाएका छन् । आगराको एक निजी स्कुलका ती शिक्षकले ७ कक्षाकी छात्रासँग अश्लील हर्कत गर्दै भिडियो बनाएर भाइरल बनाइदिए ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले ती शिक्षकलाई पक्राउ गरेर जेल पठाएको छ । आगराको दूरअछनेराको साधन गाउँमा रहेको श्रीमती बादामी देवी पब्लिक स्कुलका शिक्षक जवाहर सिंहले सात कक्षाकी छात्रालाई अफिसमा बोलाएर अ; श्लिल हर्कत गर्दै भिडियो बनाएका हुन् ।
आश्चर्यको कुरा ती छात्राले पनि यो सबै काम खुसीसाथ गरिरहेकी छिन् । घटनाको खुलासा तब भयो जब जवाहरको मोवाइल हरायो ।
त्यसलगत्तै लगातार ३ भिडियो भाइरल भए । यी भिडियो गाउँमा सयौं व्यक्तिको मोवाइलमा पुग्यो । भिडियो सार्वजनिक भएपछि जब छात्राका परिवारले देखे उनीहरुको होस उड्यो । उनीहरुले शिक्षकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराए ।
प्रहरीले शिक्षकलाई प क्राउ गरेर मु; द्दा चलाएको छ । त्यस्तै अर्को अनौठो घटना युवतीहरुले कु; मारीत्व गुमाएका छन् कि छैनन् भनेर कु; मारीत्व नै परिक्षण गरेर छात्रवृति दिइने देश हो दक्षिण अफ्रीका ।
जहाँको उथूकेला शहरकी महिला मेयरले स्कुल र कलेज जाने भर्जिन युवतीहरुलाई छात्रवृति दिने घोषणा गरेपछि यो खबरले विश्वभर सनसनी मच्चाएको छ ।
मेयर डूडू मोजिबूकोले जबसम्म युवती भ; र्जिन रहन्छन् तबसम्म छात्रवृति पाइरहने र अहिलेसम्म वार्षिक रुपमा १ सयजनालाई छात्रवृति दिइएको उनले बताइन् । सानै उमेरमा युवतीहरु गर्भवती हुँदा अनेकन समस्याहरु देखिएपछि यस्तो उपाय अपनाइएको बताइएको छ।
Prevकोरिया जाने श्रमिक मर्कामा, व्ययभार थपिएसँगै बढ्यो कोरिया जाने लागत ! किन बढ्यो लागत हेर्नुहोस्?
Nextस्वास्थ्यकर्मीका लागि रोजगारीको अवसर (सूचना सहित)
छिमेकी मुलुकमा त्रा’ स बढेसङ्गै, मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना, सबैले पढ्नैपर्ने ( भीडियो सहित )
माया त माया नै हो, तर देवरसंग यसरी पो बसेछ माया
छोराले प्रे’म वि’वाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बे’होस्
टिकटक र सेल्फी स्वा’र्थमा हराए’को मानवता, बुटवलमा जे देखियो…
भर्खरै विमान दुर्घटना हुँदा यति धेरै सबै यात्रुको भयो मृत्यु, मनमा माया भए RIP लेखेर मृतकको आफन्त सामु पर्याइदिनुहोला (3596)
भोली बाट विद्यालय बन्द हुने मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना एक पटक पढ्नै पर्ने? (1713)
भर्खरै विमान दुर्घटना हुँदा यति धेरै सबै यात्रुको भयो मृत्यु, मनमा माया भए RIP लेखेर मृतकको आफन्त सामु पर्याइदिनुहोला (1572)
वीरगंजमा स्कुल बसमा आग’लागी हुँदा यति धेरै बालबालिकाको मृत्यु (1423)
भोलि विधालय,यातायात सम्पूर्ण बन्द रहने?सरकार बाट आयो एस्तो आदेस (1017)
देशव्यापी १ महिना लकडाउनको घोषणा, भर्खरै आयो यस्तो खबर ! (992)
काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा प्रचण्डको मृत्यु (942)
13 गतेदेखि कडा लकडाउन गर्ने निर्णय,औषधि बाहेक अन्य सबै पसल बन्द? (812)